China Inogadza Gitee seimwe nzira yeGitHub | Linux Vakapindwa muropa
China yakangoita zviri pamutemo imwe nzira yeGitHub (iyo yeAmerican webhu inomiririra uye software manejimendi sevhisi) kuve Gitee kuzvipira kwake kune izvi, pamberi pechirongwa chekuzvisunungura kubva kumatekinoroji eAmerica
Gitee haisi nyowani sezvo yanga iriko kwemakore manomwe muChina, asi zvakangozivikanwa neve Ministry of Industry uye Technological Innovation yeChina sekuhwina kwetender yeakavhurika sosi software chirongwa chekubata chikuva.
Mhedzisiro kubva kumukuru weHuawei nezve izvi budiriro inotaura zvakawanda nezve icho chinangwa:
"Kana China isina nzvimbo yayo yakavhurika sosi yekuchengetedza nekugadzirisa mapurojekiti, indasitiri yedu yenyika ino ichave iri munjodzi huru kuzvinhu zvisingadzoreke. Kupindira kwaWang Chenglu kunongedzera kuzvirango zvakadzokororwa nevakuru veUS. "
Iyo Gitee kurongeka ine yakanaka chikamukubvira gadzira makwikwia mune yepamhepo masevhisi chikamu chinotongwa neUS mapuratifomu. Nekudaro, haitize hunyambiri, China inozivikanwa senyika iyo ine gumi emamiriyoni emadhora, Vakuru veChinese vatove kuisa Gitee sepuratifomu yechipiri yakakura kwazvo yekutora nekutarisira yakavhurwa sosi software mapurojekiti.
Iwo madziro anoramba achisimuka pamativi ese uye navo njodzi yekuti isu tiri kuwedzera kunanga kumagumo eInternet kurota: kutaurirana pasina miganhu uye ruzivo rwevose.
Kubva GitHub iri (harifanirwe kukanganikwa) chikuva chinoenderana nemutemo weUS uye inotonga kuburitsa tekinoroji, chikuva hachigone kushandiswa mukugadzira zvombo zvenyukireya, zvipenyu kana zvemakemikari; zvombo zvenguva refu kana zvisina kufambiswa zvemuchadenga mota.
Ichi chingango chiri chikonzero nei Ahmed Saeedi Fard's zvakavanzika zvinyorwa zvakakiiwa. Chero zvazvingaitika, aive nechokwadi chekuti United States yakamuti zviitiko izvi kwaari kuti aratidze chibvumirano chake. Kana zviri GameHub, hapana chikonzero kunze kwekunge nyika yainge yaburitswa.
Kuti tirangarire izvi, tinogona kudzokera gore rapfuura kuti titange mufananidzo wezvinotyisa zvevakuru veChinese.
Kubva mune imwe yemishumo (iyo yakaonekwa muna Chikunguru 2019) yemushandisi yewebhu kubata uye software manejimendi sevhisi inonyanya kukanganisa avo vanoshandisa GameHub paLinux.
GitHub yakavharira yedu yakavanzika matura pasina chero kumberi ziviso uye ikozvino hatichakwanise kuwana macode. Iwe haufanire kutonga vanhu nenyika dzavanobva. Unogona kudzora hurumende, asi haufanire kurambidza vashandisi vayo vanoshanda uye vakavimbika pasina ziviso.
Sezvo GitHub yanga iri yemahara chikuva chevanhu vese kwemakore mazhinji, asi yakafunga kuvharira maIran maakaundi.
Ini ndinofunga kuve uchibva kune imwe nyika haisi sarudzo yatinoita, asi kuve mugadziri uye kubatsira kune yakavhurika sosi nharaunda iri.
GitHub inotinyima rusununguko rwedu rwekupa uye kuva chikamu cheyakavhurika sosi ecosystem nekuti tinogara muIran.
Aya matanho anogona kunyatsoonekwa sekuwedzera kwe izvo zvinokonzerwa ne hondo yekutengeserana pakati peUnited States neChina.
Uye zvakafanira kuti urangarire kuti pakati paMay wegore rapfuura, Mutungamiri Donald Trump vakasaina chirevo cheutungamiriri icho chinoisa hwaro hwekudzivirira makambani ekufona eChina akadai saHuawei kutengesa michina kuUnited States.
Kufamba uku kunoitirwa kurerutsa kugona kweChina kukanganisa maAmerican anotevera-chizvarwa wireless network uye komputa masystem.
Iwo murairo unorambidza kutenga kana kushandiswa kwechero tekinoroji yekutaurirana inogadzirwa nemasangano anodzorwa ne "muvengi wekunze" anogona kukanganisa masisitimu ekutaurirana eU.S. kana kuumba "njodzi dzinokanganisa" pane zvivakwa zveUS.
Mushure meizvozvo, US department reCommerce rakatora danho rakanangana nekurambidza makambani eU.S.kutengesa zvinhu uye software kuHuawei ne70 yevamwe vanobatana navo (izvozvi paUS Rirambidzwa Rondedzero) vasina mvumo. Nekudzivirirwa kwemaakaundi emushandisi muCrimea neIran, isu tiri kutsvaga chimwe chinhu chitsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » China inogadzira Gitee seimwe nzira yeGitHub
Hunhu hwemhando idzi dzemasevhisi hunoratidza kuti ndeipi kambani ichakunda mukukwikwidzana kwekupedzisira pakati peGitHub neGitee, uye ndiyo ichave isinganyanye kuranga nenharaunda yevagadziri nevagadziri. Iyo kambani inouya padyo padyo neicho chikuru chinangwa che internet kusarerekera inozotonga mune ramangwana rerefu.
Unity Technologies inobatana neBlender Foundaion budiriro fund